Articles par pays :: Madagascar
“Raharaha kidnapping”: voasambotra i Abdi, ilay naka an-keriny sy namona an’i Own Aleck
Tsy mijanona fa mbola nitohy ny fanadihadiana momba ilay raharaha fakana an-keriny sy ny famonoana ilay teratany karana antsoina hoe Owne Aleck, tany Toamasina ny volana jona 2014. Fantatra izao fa voasambotry ny zandary tao Fenoarivo Atsinanana, ny alatsinainy teo, i Nomenjanaha...
La courbe de contamination grimpe: un second confinement n’est pas à exclure
« Raharaha Kidnapping » – 20 taona aty aoriana: maty voatifitry ny zandary i Lama sy ny rahalahiny
Nanakoako vao maraina ny poa-basy teny Analamahitsy sy teny Ambohimahitsy omaly. Tratran’ny vela-pandriky ny zandary, tsy tafavoaka tao anatin’ny fifampitifirana, Ramandiamanana Norbert, fantatra amin’ny anaram-bositra hoe “Lama” na “Baina” sy ny rahalahiny. Mbola karohina kosa i...
Départ des foyers épidémique à Toamasina: Madagascar franchit la barre des 200 cas
Mahery vaika ny fanafihan’ny valanaretina ao Toamasina: tratran’ny coronavirus ny mpitsabo mpanampy, mpiasan’ny fitsarana…
Tsy afa-bela mihitsy ny any Toamasina, ankoatra ny eto Antananarivo. Tratran’ny coronavirus koa ny mpitsabo mpanampy sy ny mpiasan’ny fitsarana ankoatra ireo sokajin’olona hafa, ao amin’ny faritra Atsinanana. Nahitana tranga vaovao, miisa enina any Toamasina, araka ny tatitry ny...
Epidémie : le paludisme fait 80 morts à Betroka
Valin-tenin’ny filoha Rajoelina tao amin’ny France 24: « Manana ny fiandrianany i Madagaskara… »
Niaro mafy ny tambavy CVO sy nametraka ho ambony ny hambompom-pirenena ny filoha Rajoelina Andry tamin’ny resaka nifanaovany tamin’ny mpanao gazety eo anivon’ny France 24 sy ny RFI, omaly. Hentitra ny tenany manoloana ny tandrefana ary tsy hihemotra intsony. Efa nifoha i Afrika s...
Andry Rajoelina sur France 24 et RFI: « Rien ne nous empêche d’avancer, ni un pays ni une organisation »
Fakana an-keriny an’i Anil Karim: olona 20 voasambotra, fianakavian’i Lama ny sasany
14 andro izay ny lasa! Mbola any am-pelatanan’ny jiolahy i Anil Karim. “Manodidina ny 20 ny isan’ireo olona voasambotra hanaovana fanadihadiana. Tsy amelanay raha tsy tratra ireo mpaka an-keriny ireo…”, hoy ny lehiben’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena (CIRGN) Analamanga...
1er cas positif à Antsirabe: Vakinankaratra en alerte rouge
Vus : 37. Votes : 0. Partages : 0.
Fihoaram-pefy amin’ny fitaterana: sarona ny kamiaon’ny tafika nitondra mpandeha an-tsokosoko
Tsy tan-dalàna sy mafy loha avokoa. Sarona tamin’ny lalam-pirenena faharoa (RN2) ny kamiaon’ny tafika nanangona mpandeha ary nikasa ny hitondra azy ireo ho any Moramanga. Niseho izany, iray andro taorian’ny fahasorenan’ny filoha amin’ny tompon’andraikitra sasany any Toamasina. Ni...
Redorer le blason de la capitale: le Conseil municipal soutient l’Exécutif
Andrasana ny valin’ny fitilian’ny IPM: vehivavy iray ahina ho matin’ny coronavirus tetsy Befelatanana
Nitranga ny tsy nampoizina. Nanaitra ny maro ny vaovao momba ny coronavirus, omaly, na ny antontanisa na ny momba ny olona tratry ny valanaretina. Anisan’izany ilay vehivavy, Raheliseheno Samueline, nodimandry tetsy Befelatanana, afakomaly. Efa mipetraka ny ahiahy, saingy mbola...
Coronavirus – Mort suspecte: le résultat du test tombera ce jour
Vus : 43. Votes : 0. Partages : 0.
Toamasina COVID_19 Madagascar Antananarivo Fianarantsoa Centre S. Moramanga Andry+Rajoelina BIANCO Hanta+Vololontiana Rijasoa+Andriamanana Betsimisaraka Fenoarivo Alakamisy+Fenoarivo Ivato lEtat Gouvernement Vontovorona Thérèse+Vola­haingo
Scandale des bonbons à 8 milliards d’ariary: Rijasoa Andriamanana limogée
Coronavirus : trois décès en 24 heures à Toamasina
Burkina Faso : Un maire et 05 soldats tués dans une embuscade terroriste
AUJOURD’HUI: 7 juillet 2018 : Décès de l’ancien international de Football, Alpha Touré
Babacar NGOM : Pour qu’on ne vous regarde pas comme un vulgaire Badolo-Milliardaire (Par Abdou khadre SAN)
Kara Mbodj : « Il sera la prochaine star de l’équipe nationale »
Chine : Un bus plonge dans le lac, 21 lycéens tués !
Vaseline, Smirnoff risk removal from trademark registry
Hotels, buses eyes dividends of reopening from corona lockdown
Land tenure woes a threat to Kenya’s urban development
Panel de haut niveau de l’UA sur l’impact de la Covid-19 sur les TPE/PME et Startups : Salimou Bamba, Dg l’Agence CI PME partage l’expérience ivoirienne
Éducation nationale : Le CNDH souhaite la délocalisation du centre d’alphabétisation de Biabou
Concours féminin d’art oratoire et de débat : Kouamé Melvyre, du lycée d’excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam remporte la 3e édition
Vus : 36. Votes : 0. Partages : 0.
CNPS : Bientôt des logements pour les agents
Covid-19/Burkina : 1003 cas confirmés dont 860 guérisons et 53 décès depuis le début de la pandémie